Boqollaal qoys oo ku barakacay daadad ku dhuftay magaalada Xudur - Radio Ergo
Boqollaal qoys oo ku barakacay daadad ku dhuftay magaalada Xudur
in Barakacayaasha iyo Qaxootiga, Wararkii u Danbeeyay
(ERGO) – Ayuuro Maxamed Kheyre waxay ka mid tahay kun iyo lix boqol oo qoys ayaa ka barakacday xaafadda Buulow ee Degmada Xudur kaddib markii roobab daadad xoogan wata ay ku dhifteen kowdii ilaa seddexdii bishan.
Waxay Raaadiyow Ergo u sheegtay in iyada carruurteeda ay guriga kala soo baxsadeed naftooda.
Qoyskeeda oo 10 ka kooban ayay sheegtay in ay degan yihiin goob qoysaska barakacay ay u soo guureen.
“Habeenkii isniinta ayaa annagoo hurdeyno biyo nasoo galay ka war helney, taleefono ayaan dirsanay si caruurta noogu la badbaadiyo. Nafteena ayaa la baxnay, guriyihii biyo ayaa dhax fadhiyo, waa dhibaato weyn,” ayay tiri Ayuro
Cabdulaahi Maxamuud Madkeer oo qoyskiisa ay ka kooban yihiin 12 ruux ayaa Raadiyow Ergo u sheegay in qoyskiisa ay dulsaar ku yihiin qoys kale oo ay qaraabo yihiin.
Wuxuu sheegey in 48 saac roob ku socdey islamarkaana daadka si tartiib tarbiib usoo galayay xaafadooda aakhirkii barakaceen.
Cabdulaahi ayaa sheegay in hadda caqabad ka haysato dhanka nolosha oo reerkiisa hal wakhti haddii ay helaan dabka shitaan.
Sidoo kale seddex ka mid carruurtiisa la jiifa cudurka duumada.
“Annaga roobka habeen iyo maalin ayuu nagu da’ayay, aniga gurigeyga wuu maran yahay wixii dhan daadka la tagay, masiibo tii ugu weyneyd ayaa nagu dhacdey,” ayuu yiri Cabdulaahi.
Qoysaskan barakacay ayaa xaalka ka sii xumaadey kaddib markii sicirka raashinka magaalada uu kor u kacay labadii todobaad uu u danbeeyey.
Magaalada Xudur ayaa waxaa ganacsiga baabuurta uga yimaanayaan magaalada Baladweyne oo daadad xoogan badan saameeyeen isbuucyadii la soo dhaafay.
Kiilada sokorta ayaa hadda uu qiimaheeda gaaray 25 kun oo shilinka Soomaaliga ah, barista iyo burka ayaa si la mid ah, sida uu Raadiyow Ergo u sheegey Nuur Raaxooy Maxamed.
“Laba kala daran ayaa nagu dhacday, barakac daad uu sababay iyo sicirkii rashiinka oo nagu qaaliyoobay, hoy la’aanta waxaa ka daran gaajada nagu hayso iyo lacag iyo shaqo la’aan,” ayuu tiri Maxamed.
Guddoomiyaha degmada Xudur, Maxamed Macalin Aadan ayaa Raadiyow Ergo u sheegay in inta badan guryihii ku yallay xaafaddaas laga guuray oo ay haawinaayaan.
“Daadadka ayaa ka yimid meel bariga magaalada ah oo roobab ka da’een, habeen iyo maalin dadka oo ogayn ayay soo galeen,,mararka qaar iyadoo magaalada roob ka da’ayo ayaa daadkana imaadaa, marmarna daad keliya ayaa soo galo,” ayuu yiri guddoomiyaha.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in biyaha daadka ay dumiyeen musqulihii xaafadda Buulow oo ah dhul hooseeya oo god ah ku yaalla.
“Walwalka ugu weyn waa qatar caafimaad la ma kala garanayo biyaha daadka iyo wasaqdii musqulaha, way isku furmeen, ceelashii biyaha halis ayay galeen, dhibaatadan oo kale waa wax nagu cusub,” ayuu yiri guddoomiyaha.
IDAACADDA MAANTA SABTI 9-NOV-2019
IDAACADDA MAANTA ISNIIN 11-NOV-2019